Momba anay - Camei Ele & Stationery Co., Ltd.
Ny orinasanay dia manana orinasa fanamboarana mahery vaika, izay mahatratra 12000 metatra tora-droa, manana mpiasa 300 mahery, dia manana fitaovana fivoarana avo lenta sy fitaovana fanjaitra avo lenta, ny fotoam-pamokarana famokarana dia 20-40 andro, ny fanaovana kitapom-panodinana dia 1- 7 andro, ny tsingerin'ny sampling haingana indrindra dia afaka 1 andro raha vao mahazo ny fepetra takiana isika. Nandritra izay 25 taona lasa izay, dia nifikitra tsy tapaka tamin'ny fotoana momba ny kalitao sy ny fotoana fandefasana izahay. Ny fahitan'ny mpanjifa dia fandresena-fandresena ary famoronana miaraka amin'ny ho avy. Mino izahay fa ny fiaraha-miasa amin'ny fiaraha-miasa dia azo antoka fa hanampy ny antony ataonao bebe kokoa!
Quanzhou Camei Stationery Bag dia natsangana tamin'ny taona 2003, izay orinasa sy indostrian'ny varotra, manampahaizana manokana amin'ny fampandrosoana, ny famokarana, ny fivarotana ny harona ary ny fitaovana fitehirizana. Izahay dia nandalo ny fanamarinana momba ny ISO9001, BSCI, SEDEX, ary koa ny fanamarinana ny orinasan-tserasera malaza vahiny (toa an'i Walmart, Office Depot, Disney, sns). Ny vokatra ataonay dia vita amin'ny asa 2: asa vita amin'ny asa be loatra toa ny kitapo fandefasana, kitapom-bary, tabilao, kitapo pensilihazo, kitapo fitehirizana; amin'ny fanamboarana stitching toy ny portfolio, famaton'ny zipper, poketra pensilihazo, kitapo miantsena, harona kosmetika, kitapo solosaina sns .. Ny orinasa aminay dia manana fahaiza-manao mahaleo tena momba ny famolavolana sy ny fivoarana, misy karazana kitapom-pitiavana, endrika manentana, kalitao avo lenta. Aondrana any amin'ny firenena sy faritra maro toa an'i Eropa, Etazonia, Japon, sns., Dia nahazo laza tsara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Miaraka amin'ny fampandrosoana ny COVID-19 dia mihena ny toe-karena. Eo ambanin'ity toe-javatra ity, ny orinasa sasany dia miato ny fihazakazahana, na izany aza, i Camei dia tsy vitan'ny miantoka ny fandidiana amin'ny ankapobeny, fa mifantoka ihany koa amin'ny fanatsarana ny tenantsika amin'ny alalàn'ny fikarohana sy ny famolavolana vokatra ary ny fampivoarana ny fitantanana anatiny mba hanomezana tolotra mahomby sy feno ho an'ny mpanjifa aorian'ilay valan'aretina.
Tao anatin'ny 2020 taona, nanao sonia fifanarahana miaraka amin'i Beijing Changsong Consulting Co, Ltd i Camei mba hanomezana fiofanana ara-teknika ho an'ny mpiandraikitra ny serivisy rehetra.Each ny asa fitantanana dia mianatra sy mitombo amin'ny fampiofanana, mampivoatra ny fahaizan'ny fitantanana azy manokana.Izany no mahatonga ny orinasa ho toy ny mahomby kokoa noho ny teo aloha, ny hatsaran'ny mpiasa dia nihatsara.Mba hahafahantsika manompo ny mpanjifa bebe kokoa sy hiatrehana ny asa mandeha haingana kokoa.